चलचित्र ‘शुभ लभ’ पनि युट्युबमा सार्वजानिक नहुने - ConfuseNepal
हरेक हप्ता सार्वजानिक हुने नेपाली चलचित्रहरु दर्शक अभावका कारण हलमा चल्न छाडिसकेका छन् । निर्माताको करोडौंको लगानी हलुवामा बलुवा बराबर बनेकाे छ । हल सञ्चालकहरु उसै दर्शकहरुकाे फितलाे उपस्थितले चकमन्न बस्न बाध्य भएका छन् । तर, नेपाली चलचित्र जगतमा न निर्माण न त प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन । प्रत्येक शुक्रवार दुईभन्दा बढी चलचित्र सार्वजानिक हुने क्रम जारी नै छैन । तर, नेपाली चलचित्रकाे व्यापारकाे आँकडा हेर्ने हाे भने वर्षमा दुई वा तीन चलचित्रले मात्र सफलता हात पारेका छन् ।
हलको चलचित्र व्यापार पट्यारलाग्दो हुनुको पछाडि विभिन्न कारण छन् । पहिलो, मौलिकपन लोप हुनु । हलिउड वा बलिउडबाट ताेडमाेड गरेर र दुई/चारवटा चुटकिला जोडेर चलचित्र बन्ने क्रमको विकास भएपछि अहिले नेपाली चलचित्र भनेपछि दर्शक नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । दोस्रो, युटयुब । हलमा सार्वजानिकको केही हप्तामै चलचित्र युट्युबमा आउने आशामा दर्शक हलसम्म जानै छाडिसकेका छन् ।
हलबाट उत्रिएको केही महिनामै आजकाल चलचित्र युट्युबमा सार्वजानिक हुने गरेका छन् । जब केही हप्तामै घरमा पूरै परिवारसँग बसेर फ्रि अफ कस्टमा चलचित्र हेर्न पाइन्छ भने महँगो टिकट काटेर दर्शक किन हल जान्छ ? साथै, अहिले हल र डिसहोममा एकसाथ चलचित्र सार्वजानिक हुने गरेको छ । यसले पनि हलको व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको सराेकारवालाहरुकाे भनाइ छ । तर, यसतर्फ निर्माताहरु भने गम्भीर भएको देखिदैन ।
प्रदर्शनमा आएको ६ महिना पनि नवित्दै चलचित्र युट्युबमा आउन थालेपछि अहिले हलको व्यापारमा खडेरी लागेका छ । यसले नेपाली चलचित्रको व्यापारमा दिर्धकालिन असर पुग्ने देखिन्छ । केही चलचित्र निर्माणकर्ताले भने युट्युबमा चलचित्र सार्वजानिक गर्दा हलको व्यापारमा असर पुग्ने भन्दै आफ्नो चलचित्र युट्युबमा सार्वजानिक नै नगर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, यो चलचित्र सार्वजानिकको पूर्वसन्ध्यामा दर्शकलाई हलसम्म तान्ने उपायमा मात्र सीमित छ ।
सार्वजानिकपूर्व अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने स्टारर चलचित्र ‘धनपति’ युट्युब सार्वजानिक नहुने भन्दै निर्माता तथा निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले घोषणा गरेका थिए । तर, हलमा सार्वाजानिकको ६ महिनामा नै चलचित्र युट्युबमा आयो । ‘छक्का पञ्जा’ को दुई सिरिज र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ पनि युट्युबमा सार्वजानिक नगर्ने भनिएको छ । यी चलचित्र युट्युबमा आउँछन् वा आउँदैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यसबीच, यही शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘शुभ लभ’ पनि युट्युबमा सार्वजानिक नहुने भएको छ । युट्युबमा चलचित्र सार्वजानिक हुने आशाले दर्शक हलसम्म नजाने हुँदा चलचित्र युट्यबमा सार्वजानिक नगर्ने निर्णय लिइएको निर्माण टिमले बताएका छन । ज्योतिषबाट अभिनेता भएका हरिहर अधिकारीले ‘शुभ लभ’ युट्युबमा नकुर्न दर्शकलाई आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘चलचित्र युट्युब सार्वजानिक हुँदैन ।’
← कवि सुष्मा रानाहँमाको नया गीत बजारमा
अराजको हिन्दी गीत ‘आ भि जा’ (भिडियो) →
धरान खानेपानी संस्थान र आयोजना एकीकरण भइ बाेर्ड मा…